Somali daily News – Moh Faarax oo ay u dhasheen labo mateene ah Home
Moh Faarax oo ay u dhasheen labo mateene ah
shingani August 26, 2012
(xamarweyne.com):-Ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee dhanka oradada Maxamed Faarax ayaa la soo sheegayaa in magaalada London ay ugu dhasheen labo caruur ah oo mateene ah kuwaasoo gabdho ah.
29-jirkaani Soomaaliyed oo haysta dhalashada Dalka Britain ayaa dhawaa ku guuleystay labada biladood ee dahabka tartankii Olypikada Aduunka ee london lagu qabtay bishaan,orodyahanada ayaa saxaafada u xaqiijiyay dhalashada labada mateene ee xaaskiisu umushay.
“waan ku faraxsanahay labada mataane ee ay ii dhashay xaaskeyga Tania “ayuu yiri Moh Farax oo la hadlayay saxaafada kadib dhalashada caruurtiisa mataanahaa waxaana uu intaasi ku daray in maanta uu ka qeybgeli doono ciyaaraha Aviva Grand Pix oo ka socda magaalada Brimingham sidaa daraadeedna uusan xaaskiisa booqan karin maanta mar ay wariyayaashu weydiiyeen inuu isbitaalka tagi doono.
Ciyaaryahankaani ayaa taariikh lama ilaawaan ah ka dhigay tartankii Olimbikada Aduunka ee lagu qabtay magaalada London markaasoo uu ku wada guuleystay bilada dahabka ee 10-ka kun iyo 5-ta kun.
Telivishanka SKY News ayuu Moh farah u sheegay inay u dhasheen labo mataane ah daqiiqado yar kadib markii xaaskiisu dhashay labada mataane waxaana uu isagoo faraxsan yiri “”waxaan idin hayaa war farxad leh oo aan rabo inaad ila qeybsaataan ,taasoo ah inay ii dhasheeen labo gabdhood oo Mataano ah”
Waxaa aad loo xasuustaa in Moh farah markii uu ku guulestay labada Bilood ee dahabka ah uu sheegay inuu u hibeyn doono labada gabdhood ee u dhalan doona maalmo kadib taasoo uu iminka xaqiijiyay.